Igumbi leChandralok Villa Super Deluxe
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguSurendra Singh
USurendra Singh yi-Superhost
I-Chandralok Villa ibekwe ngokuthe ngqo kunxweme olusemantla e-Rangsagar Lake, ichibi elenziwe ngobuqhetseba, elakhiwe ngo-1668. Le villa ibekwe kwindawo yokuhlala yesithili esiyimbali sase-Ambamata singqongwe ziindledlana eziphithizelayo ezimxinwa kunye nezindlu zehasili zesintu. Itempile yaseAmbamata.Itempile enkulu yamaHindu ethathwa njengenye yeendawo zonqulo eziphambili eUdaipur. Le Tempile yagqitywa ngo-1664 ngumaharana Raj singh Mewar ngokwemiyalelo yesithixokazi uAmbamata.
IChandralok villa Homestay inezindlu ezimbini ezisanda kulungiswa ezijonge kwicala elingasemantla eRangsagar Lake. Ezi zindlu zimbini zinkulu kwaye zilungiswe kakuhle zibekwe kumgangatho wesibini ofikeleleka ngokulula wevilla enkulu nephangaleleyo kwaye ibonelela ngazo zonke izixhobo zale mihla zoNdwendwe.
Igumbi ngalinye lokulala libonelela ngebhedi enkulu yobukhulu benkosi enomandlalo we-intshi eyi-9 enefenitshala emnandi yeRajasthani kunye nezixhobo zokwenza ikofu yeti. Zifakwe umoya opholileyo kunye nefeni yesilingi kunye nesifudumezi segumbi xa unokuziva ubanda. Ifulethi ngalinye linegumbi lokuhlambela elitofotofo kwaye lixhotyiswe ngentloko egqwesileyo kunye neshawari yesandla, ishampoo yokomisa iinwele njlnjl, ezilungiselelwa yonke imihla.
Amafulethi ahlulwe yipaseji emfutshane kunye neLounge yeendwendwe ezitofotofo. ILounge inebalcony apho undwendwe lukwazi ukonwabela isidlo sakusasa sakusasa esijongene neLake. Ngelixa uhleli kwibalcony ukonwabela ikomityi yekofu okanye i-Chai uya kubona isiqithi seentaka ezithandekayo apho iintaka ezifudukayo ezahlukeneyo zihlala khona. Ukusuka apha ungakonwabela ukumamela ukuntyiloza kweentaka kunye nokubukela ubuhle bokuphuma kwelanga isiqalo esigqibeleleyo sosuku lokuhlola okanye lokuphumla.
Kukwakho nekhitshi kunye nendawo yokupheka kumgangatho weendwendwe osetyenziselwa wena wedwa, uxhotyiswe ngazo zonke izinto zokupheka kunye nezitya. IneFriji (njengegumbi ngalinye lokulala) kunye nesipheki kunye nesinki ukuze ukwazi ukuziphekela nantoni na ukusuka kwisidlo esilula ukuya kwinto enomdla ngakumbi.
Kukho iimarike zokutya ezaneleyo ezibonelela ngeyona mveliso intsha yalapha ekhaya kunye nevenkile ezinkulu apho izithako zamazwe ngamazwe zifumaneka khona.
Le ndlu ikwindawo yokuhlala eyeke kakhulu kwaye yabucala kwaye inika indawo enoxolo kakhulu yokuphumla kwaye uthathe i-charm yesixeko sase-Udaipur.
Kumgangatho wesithathu yindawo entle yophahla ejonge ngaphaya kwechibi laseRangsagar.
4.98 ·Izimvo eziyi-58
4.98 · Izimvo eziyi-58
Umbuki zindwendwe ngu- Surendra Singh
I mr.surendra singh shaktawat who at present successfully running a traditional Jewelry showroom in the heart of city under the name SILVER CORNER from last fifteen years, i started my carrier as a receptionist in a small Hotel before twenty years and during my long journey i worked for small hotels as well as five star hotel like lake palace and laxmi villas during my journey for travel industries i learnt how to keep traditions of ages the thrust is in aboriginal colorful rajasthani culture and providing perfect homely environment to make travelers stay eternally memorable in Udaipur ,
I mr.surendra singh shaktawat who at present successfully running a traditional Jewelry showroom in the heart of city under the name SILVER CORNER from last fifteen years, i starte…